Zvakanakira nekuipira, izvo zvainanga Xintai mu nepachinko parlors
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira, izvo zvainanga Xintai mu nepachinko parlors
Muna nepachinko yokumusoro, etc. pamberi chiteshi, unogona zvakare kuridza Ivepo akabudiswa pakarepo mushure Xintai. In, zvakanakira nekuipira aiming munhu Xintai akadaro, tichakurukura chikamu ipi. Kutanga, zviri chikomborero, mazuva mashoma okuzivisa Xintai, ndechokuti kumusoro sevanonyanya chipikiri-Horukon kusanganisira inotapira yakatarwa munharaunda pakutanga. Kunyange zvazvo
Xintai, tanga akatanga zvakare ari pedyo chitoro muenzaniso chete panguva imwe chete. Xintai Ichokwadi nekuti kana nemwaka zvigadzirwa izvozvo, vanhu vanoda kurova kazhinji. Zvisinei, zviri pedyo to've vakanga kunyimwa vatengi zvakadaro, hatina njere kusuma dambudziko zvikuru. Zvadaro, kuti sweeten mazuva mashomanana kubva pazuva rokutanga, I kazhinji nepachinko shopu zvokuti rotational nokukurumidza iri mari.
sezvo kunze, kana iwe usingagoni kurova chete panguva chitoro munharaunda pamusoro sumo, pangava kupora Kurongwa nokuti bara arambewo vanhu kuungana.
Zvisinei, kana achiri sepokuwana kuitika nokuda yemhuka Xintai, ari kutaura mazuva matatu pane zvakawanda kuti chinangwa maziso.
nekuipira, asi Xintai ane pfungwa kuti zvakaoma kuva akasununguka tafura, ndiko kuti zvichida kuti akapora kubva papera anenge 3 days. First Xintai, akasuma zuva rokutanga inewo rotari, kubva pazuva rechipiri, uyewo ikoko kazhinji kuva zvizere tafura kubva mangwanani. Mukuwedzera, kune vakadaro dzakakurumbira yokutevedzera, nguva dzose kana vamwe vanhu vakasununguka yokumirira, kana pane payout, izvozvo chii hayaizoitika kuti vakasununguka tafura kuva. yakarohwa kana
zvirokwazvo, ndiko kuti murege chete kupinda imwe mangwanani.
uye chiri chipikiri kuchinja uye Horukon ezvinhu, Xintai kuitira kuti Barker, remazuva matatu nzvimbo kubva pakatanga zuva rokutanga, asi isu kuvhura pane zvisingatomboiti kugadziridzwa, kubvira pazuva 4 chinzvimbo, saka aizopinda pakupora muoti , une shoma yakasimba.
Ichi Xintai zvakanakira nekuipira paavhareji munhu nepachinko yaiitirwa, ari anotyisa nepachinko yokumusoro, sungisa kubva Xintai sumo zuva rokutanga, panewo chitoro kuti vauye muunganidzwa. Of Xintai hwakadaro nepachinko yokumusoro, akatendeseka Benefits Ndinofunga pane zvishoma.
Achitaura nechisimba, riri pamusoro ndechokuti wavanozvisunga azvino womuenzaniso. Ari kupora kubva pazuva rimwe, zvakanakira Xintai vachanyangarika zvose. Kana chinangwa
Xintai, enda kurova sumo zuva wokutanga munorumbidzirweiko, ipapo mazuva maviri kana uri chipikiri kuchinja uye Horukon ezvinhu, ndinofunga kuti zvaizova angave kuyeva munhu kuramba tsika.
Latest yokutevedzera, asi uchada varove zvakatowanda kana dzakakurumbira yokutevedzera, kana tsvimbo kuhwina, Xintai Ndinofunga zvakaoma harungashandurwi. Tarisa Xintai muitiro nenguva okusuma
zvakanaka kuenda nepachinko parlors, kana kubatsira zvitoro zvizhinji muna Xintai, kana kuedza kuti varove kubva Sarudza kana zvazvakaipira kazhinji tenga kubva.